New Marvel၊ Star Wars နှင့် Disney ရုပ်ရှင်များသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် Netflix သို့ပြန်သွားသည် - Netflix သတင်း
နယူး Marvel၊ Star Wars နှင့် Disney ရုပ်ရှင်များသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် Netflix တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်
New Marvel Star Wars
R မှ Marvel စတူဒီယိုများ 'BLACK PANTHER..L: Nakia (Lupita Nyong'o), T'Challa / Black Panther (Chadwick Boseman) နှင့် Shuri (Letitia Wright) ..Ph: Film Frame .. © Marvel Studios 2018
netflix 2016 အပေါ်ကောင်းသောခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်
Netflix ရဲ့ကျိန်စာ၌ကက်သရင်း Langford ကြယ်သရုပ်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်း 13 အကြောင်းရင်း Riverdale သည်စီးရီးပေါင်း ၃ မှ ၆ နှစ်အထိ Netflix တွင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်
Black Panther၊ Star Wars: နောက်ဆုံးဂျီဒီ၊ Moana နှင့် 2016၊ 2019 အကြားဖြန့်ချိခဲ့သော Disney၊ Star Wars နှင့် Marvel ရုပ်ရှင်အသစ်များအားလုံးသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် Netflix သို့ပြန်လာလိမ့်မည်။
Disney သည်ကိုယ်ပိုင် streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ခြင်းနှင့်အတူလူတိုင်းသည် Marvel, Pixar နှင့် Star Wars ရုပ်ရှင်များအပါအ ၀ င်သူတို့၏ခေါင်းစဉ်များကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်ဟုလူတိုင်းကယူဆခဲ့ကြသည်။ နှင့်အညီ, က Netflix ကစာရင်းသွင်းသူများအတွက်ကောင်းသောသတင်းပါပဲ။
ကနေအစီရင်ခံစာအရ Bloomberg , Black Panther၊ Moana၊ Star Wars - နောက်ဆုံးဂျီဒီ 2016 နှင့် 2019 အကြား Netflix တွင်ထည့်သွင်းထားသောအခြား Disney အသစ်၊ Star Wars၊ Marvel နှင့် Pixar ရုပ်ရှင်အသစ်များသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် Netflix သို့ပြန်လာလိမ့်မည်။
Netflix နှင့် Disney သည်ယခင်ကလူသိများခဲ့သောရုပ်ရှင်ထက်စာချုပ်ချုပ်ရန်ပိုမိုသဘောတူခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အားလုံးသူတွေကိုကြိုက်တယ် Avengers: Infinity စစ်ပွဲ၊ Thor: Ragnarok၊ Star Wars: The Last Jedi နှင့် Rogue One, Zootopia, The Incredibles 2, Coco, ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်သည်အထိခဏသာဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ထပ်မံ၍ Netflix သို့ပြန်လာလိမ့်မည်။
အစီရင်ခံစာအရထိုရုပ်ရှင်များကို Disney Plus မှထုတ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ Netflix သည်သင်ဤခေါင်းစဉ်များကိုလွှင့်ထုတ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါက streaming ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကြီးမားသောအနိုင်ရရှိပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲဒီအိမ်မှာ Mouse အိမ်ကရုပ်ရှင်အသစ်တွေလည်းမပါဝင်ပါဘူး။ ၎င်းသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၉ မှရုပ်ရှင်အသစ်များသာပါဝင်သည်၊ ထိုခေါင်းစဉ်များသည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအပြီးတွင် Netflix သို့ ဦး တည်သွားသည်။
ဒစ္စနေးနှင့် Netflix အကြားမူရင်းသဘောတူညီချက်သည် ၂၀၂၀ အထိတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်ဟုယူဆခဲ့သော်လည်းယခုနှစ်တွင်၎င်းတို့၏ streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ရန်သဘောတူထားသည်။ အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်မှာအကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်တွေအားလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားတာဟာကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါ Captain Marvel၊ Avengers: Endgame၊ Aladdin၊ The Lion King၊ Toy Story 4၊ နှင့် Star Wars: Skywalker ၏မြင့်တက်မှု။
ချိုမြိန်သော Magnolias ရာသီ ၂ ရက်ကို ၂၀၂၂ အထိနောက်ကျစေခဲ့သည်
The Dark season3ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း - ရာသီသစ်တစ်ခုရှိပါသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
Netflix မှာ Sailor Moon လား။
Mitchells vs the Machines သည် ၂၀၂၁၊ 30ပြီ ၃၀ ရက်၊ ယနေ့ည Netflix သို့ရောက်ရှိလာသည်
Netflix သို့လာရောက်သော Disney ရုပ်ရှင်အသစ်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်တကား!
၎င်းသည် streaming network အတွက်နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကောင်းမွန်သည်။ streaming ကွန်ယက်သည် Hulu နှင့် Amazon Prime အပြင် Disney Plus၊ WarnerMedia ထုတ်လွှင့်မှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အခြား streaming ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အကြောင်းအရာအားလုံးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေစဉ်၊ Netflix သည်သူတို့၏စာကြည့်တိုက်နှင့်မူရင်းအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အထက်တွင်ရှိသည်။
၎င်းသည် streaming ကွန်ယက်သည်လူအချို့ထင်ထားခြင်းထက်အနာဂတ်ကိုပိုမိုခိုင်မာစွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်းပြသနေသည်။ သူတို့သည်လူကြိုက်များသည့်ခေါင်းစဉ်များထားရှိသည့်ပြissuesနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ကိုသူတို့အမြဲသိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြီးကျယ်သောအကြောင်းအရာများကိုစတင်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်ကာလတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်တိုတောင်းသောကာလများထက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းသူတို့သိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါဤသဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်မှုအသစ်အကြောင်းပိုမိုသင့်အားပြောပြပါမည်။ ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းခဏပိုမိုသိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေတူသောအသံ။
မင်းကြည့်နေမလား အနက်ရောင် Panther ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှာ streaming network ကိုပြန်လာတဲ့အခါဒီရုပ်ရှင်တွေအားလုံး? နောက်တာပါ! ထို့နောက်ကမ္ဘာကြီးမည်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုမည်သူသိသနည်း။
နောက်တစ်ခု:အခုအချိန်မှာ Netflix မှာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်
7 သေစေနိုင်သောအပြစ်များကို anime Netflix
max ကိုမှောင်မိုက်ရာသီ2တွင်သေဆုံးပါဘူး
မတ်လ 2018 hulu အသစ်
သင်တစ် ဦး mtv ရာသီ3ဖြစ်ကြသည်
အမေရိကန်အဖေရာသီ 13 hulu